तरवारको धारमा पोखरेलको राजीनामा र राजनीतिक यात्रा | ईमाउण्टेन समाचार
तरवारको धारमा पोखरेलको राजीनामा र राजनीतिक यात्रा
वैशाख १९, २०७८ पढ्न ७ मिनेट
काठमाडौं । नेकपा एमाले नेता शंकर पोखरेल पार्टीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मानिन्छन् । तर त्यसमा पनि उनी पृथक छन् । ओली निकट मानिएका अरु भन्दा भिन्न स्वभाव छ उनको । उनी धेरै फतर–फतर बोल्दैनन् । तर जे बोल्छन् साँचो बोल्छन् ।
२०६२ सालमा एमालेले माओवादीलाई शान्तिपूर्ण मुलधारमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको थियो । तर कसरी र कुन मुद्धामा ल्याउने भन्ने टुंगो थिएन । तत्कालीन माओवादीको माग भने बाहिर आएको थियो । ती माग थिए गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधान सभाको निर्वाचन । त्यो बेला माओवादी प्रष्ट थियो । तर एमाले र कांग्रेस द्धिविधामा थिए ।
२०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिए । तर सबैभन्दा पहिला गणतन्त्रको बिगुल फुक्ने पार्टी एमाले नै थियो । २०६१ साल माघ २२ गते एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो । सो बैठकले नै ,गणतन्त्रका लागि आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्‍यो । जसलाई जति मन परे पनि नपरे पनि त्यसको नेतृत्व तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले गरेका थिए । तर पनि माओवादीलाई कुन मुद्धामा कसरी ल्याउने भन्नेमा एमाले क्लियर थिएन ।
सोेही समयमा तत्कालीन एमालेका केन्द्रीय सदस्य रहेका शंकर पोखरेलले त्रिपुरेश्वरमा आयोजित एक कार्यक्रममा मुख खोले अन्तरिम सरकार प्रस्थान विन्दु र संविधान सभाको निर्वाचन परिणाम विन्दु । तर पोखरेलको यो बिचारमा धेरै एमालेहरुले मुखामुख गरेका थिए । माओवादीभन्दा बाहेकका पार्टीमा यो विचारका प्रवर्तक नै थिए पोखरेल ।
कतिपयले उनलाई तत्कालीन माओावादी विद्रोहीको मतियार भएको समेत आरोप लगाएका थिए । तर उनी माओवादीका कटु आलोचक थिए । तर आखिर पोखरेलको बाटोमा एक दिन मुलुक गएर छोड्यो । कुनै बाटो देखाउन उमेर वा केस फुल्नुसंग सरोकार छैन भन्ने उदाहारणका पात्र छन् पोखरेल । तर नेपाली समाजमा जिउँदोमा कदर नगर्ने र मरेपछि धुप बाल्ने चलनका शिकार भएका छन् पोखरेल ।
पोखरेल चुनावी नेता होइनन् । उनी जस्तै अर्का नेता हुन् घनश्याम भुसाल । उनीहरु माक्र्सवादको पिँजडामा राखिएका सुगा जस्तै हुन्। चुनावमा जाँदा कसैले धारा हलिदिनु पर्‍यो भनेर माग गरे, जवाफमा तपाई जस्तो क्रान्तिकारी भएर यति सानो कुरा गने , कालमाक्र्सले कति धारा हालेका थिए भनेर उल्टै कार्यकर्ताको दिमाग भुट्ने क्षमता उनीहरुमा छ ।
यस कारणले पोखरेल र भुसालले धेरै चुनाव जित्न सकेनन् । तर दुबैले एकै चोटी चुनाव जिते। उनीहरुको चुनाव जिताईलाई धेरैले टिप्पणी गरे– कहिले काँही कुुकुरलाई हान्दा ढुकुर पनि मर्ने रहेछ । तर जे भए पनि पोखरेल र भुसाल चुनावका नेता होइनन् । उनीहरु त विचारका नेता हुन् ।
पोखरेलले आइतबार लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले चलखेल अन्तरगत राजीनामा दिएको धेरैले अनुमान गरेका छन् । यो कुरा सही पनि हुन सक्छ । तर उनी समीकरणका खेलाडी होइनन् । विचारका खेलाडी हुन् । समीकरणका खेलाडी हुने भए उनी ओली समूहमा हुँदैनथे । उनको एकल सरकार बनाउने सपना केन्द्रमा भएको एमाले विवादले पुरा गर्न दिने सम्भावना कम छ । राजीनामा दिएका पोखरेललाई कर्णाली प्रदेशको फ्लोक्रसको बाछिटाले छुने निश्चित जस्तै छ ।
राजनीति‐मा वर्गिकृतLumbiniPradesh, ShankarPokhrel
लुम्बिनी प्रदेशमा पोखरेल कै नेतृत्वमा एकल सरकार निर्माणको कसरत
वर्तमान सरकारलाई कुनै पनि हिसावले विश्वास नगुर्नपर्ने कारण छैनः प्रधानमन्त्री ओली
एमाले अध्यक्ष ओली नेपालबिच भेटवार्ता सुरु
योगेश भट्टराईले किन गरे युथ फोर्स र अखिल फाेर्स खारेजीको माग ?
ओली र नेपाल जुध्दा दाहाल निर्णायक !
अखिलको बैठक अघिको नाराः ‘ओली जिन्दावाद, प्रचण्ड देश छोड’